अमेरिकी एनआरएनमा चुनावी सरगर्मी सुरु - Pahilo News
२६ असार । सदस्यता निक्र्योलसम्बन्धी लामो विवादलाई चिर्दै निर्वाचन समितिले अमेरिकी एनआरएन निर्वाचनको आगामी सन् २०१७–१९ कार्यकालका लागि निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको छ । आगामी अगष्ट महिनाको ११ र १२ तारिख निर्वाचन तय गरेसँगै नेतृत्व लिन इच्छुकहरुले गत जुलाई ८ तारिखको समयसीमाभित्रै मनोनयनपत्र दाखिला गरेका छन् ।
अमेरिकी डायस्पोरामा एनआरएनमार्फत नेतृत्व गर्न इच्छुक अनुहारहरु प्रष्ट रुपमा नेपाली राजनीतिकका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस समूहमा ध्रुवीकृत हुन पुगेका छन् । टेक्सासमा बस्ने व्यापारी गौरी जोशीले एमालेका लागि अमेरिकाबाट सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको समूहको नेतृत्व गरेका छन् ।
उता, वर्तमान अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले अधिकांश कांग्रेस समर्थकहरुलाई समूहमा राखेर अध्यक्ष पदमा पुनः उम्मेदवारी दिएका छन् । डा. पौडेलले जनसम्पर्क समितिका सल्लाहकार सुनिल साहलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छानेका छन् । उनले आफ्नो समूहबाट उपाध्यक्षमा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सल्लाहकार भूवन आचार्य र कांग्रेस निकट राधा पौडेललाई समावेश गरेका छन् । त्यसैगरी जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका संस्थापकद्वय टेक्सासबासी कृष्ण लामिछाने तथा डा. अर्जुन बञ्जाडेलाई कार्यकारी सदस्यका रुपमा डा. पौडेलले आफ्नो समूहमा राखेका छन् । २३ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि डा. पौडेलले कांग्रेस समर्थक होम गौतमलाई सचिव तथा गोविन्द श्रेष्ठ र पशुपति पाण्डेलगायतलाई सदस्यमा समावेश गरेका छन् भने महासचिवमा बीआर लामालाई राखेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका डा. पौडेल नेविसंघको नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्ति हुन् । उनको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिने प्रायः सबै नेपाली कांग्रेस निकटका छन् भने जोशीको प्यानलमा भने अधिकांश एमाले एवम् वामपन्थी विचारधाराप्रति आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरुको बाहुल्यता रहेको हुनाले जोशीले वामपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने देखिएको छ ।
डा. केशव पौडेल, गौरी जोशीसँगै कृष्ण पोखरेल, रविना थापा, रामसी पोखरेलसमेत अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका कृष्ण पोखरेल भने एक कार्यकाल पनि कार्यसमितिमा बसेर काम नगरेका कारण गौरी जोशीको उम्मेदवारी रद्द भएको खण्डमा च्याँखे थाप्ने दाउमा रहेको बताइन्छ । उता, रविना थापा र रामसी पोखरेल भने क्षेत्रीय संयोजक र क्षेत्रीय उपसंयोजक पद हात लाग्ने ग्यारेन्टी भए उम्मेदवारी फिर्ता लिने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ ।
अधिवेशन सफलताको शुभकामना पत्रमा ओलीले आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचका लागि देश र्फकन समेत आह्वान गरेका गरेक..